प्रणय दिवसः: प्यारी प्रकृति आज फेब्रुअरी १४
बिही, फागुन २, २०७५
प्यारी प्रकृति आज फेब्रुअरी १४
भ्यालेनटाईन डे अर्थात प्रणय दिवस ।
विशेषगरि युवा पुस्ताहरु आजको एक साताअघि बाट नै कहिले रोज डे, कहिले चकलेट डे, कहिले प्रपोज डे,कहिले प्रमिस डे, कहिले किस डे त कहिले हग डे अनि कहिले टेडि डे भन्दै यसको रौनक सुरु भएको सोसल मिडियाहरुमा देख्न सकिन्छ । एक हिसाबले हेर्दा प्रेममा सफल भएका वा हुन खोजेका जोडीहरुको निम्ति प्रेमको गाठो अझै मजबुत बनाउन अनि प्रेममा असफल जोडिहरुको निम्ति नया प्रेमिल जीवन सुरुवात गर्नको निमित्त यो डे ठिकै पनि होला तर अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने साँचो स्थायी अनि निस्वार्थ प्रेम गर्न किन यो डे नै कुर्नुपर्यो र? माया शब्दले जुन गरिमा व्यक्त गर्नुपथ्र्यो तर त्यो गर्न सकेको छैन । कहाँ महिला र पुरुष, युवा र युवतीको मात्र मायाको कुरा हो र अचेल ।
मायामा स्वार्थ मिसिएपछि त्यसको यर्थाथ गरिमा टिकाउन गाह«ो हुन्छ ।
तर यो स्वार्थ नै स्वार्थले भरिएको दुनियामा निस्वार्थ सच्चा प्रेम गर्ने मानिस सिमित छन् जस्तो लाग्छ मलाई । आउनुहोस् मायाको परिभाषा बदलेर निस्वार्थ रुपमा प्रकृतिलाई माया गरौँ । प्रेम गराँै निस्वार्थ माया , ममता कि खानी प्रकृतिलाई ।
आज माया, रिस घृणा सबै गर्ने व्यक्तिलाई प्रकृति एकोहोरो माया गरिहेकीछिन् । प्रकृतिमा फोहर गर्ने, विनाश गर्ने र आफ्नै स्वरुपमा बाच्नँ नदिनेलाई पनि माया । हेर्नुहोस् त कत्ति निस्वार्थ माया गर्छिन प्रकृति । भन्छन् नि ओन साईडेड लभ ।
हामी बाँच्ने आधारनै प्रकृति हुन् । पिउने पानी र सास फेर्ने हावाको मात्र कुरा कहाँ हो र ? सामाजिक भन्ने गरिएका मानिसका असामाजिक व्यवहार र कामले प्रकृति दिनानुदिन समस्यामा छिन् । उनको मायाको महत्व नबुझेर त होला सायद वेला वेलामा उनी आक्रोस स्वरुप प्रकोप लिएर आउछिन् । भुकम्प, बाढी, पहिरो, भुःक्षय आदि बनेर ।
उनको प्रेमलाई बेवास्ता गर्दै हामी सभ्य भनिएका मानिसहरु प्रदुषणजन्य काम, वन विनाश, खेतीयोग्य जमिनको नाश, अस्तव्यस्त फोहर फाल्ने काम गरिरहेका छौँ । मानिसका व्यवहारले उनको मात्र कहाँ हो र हाम्रोपनि आयु र अस्तित्व घटिरहेको छ जुन विर्सिएका छौँ । मानिसका रहर वा बाँच्नका लागि बाध्यता बनेर उनमा अन्याय गर्दै विनाश गर्दा फाईदा त पक्कै हुन्न होला नि । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न संसारनै धरापमा राख्ने काम गरिरहेका छौ । देश होईन हाम्रो मनोवित्रान गरिब भएर यस्तो भएको हो झैँ लाग्दैछ ।
सोचौ त एकपटक, कतै हामीले प्रेमको उन्मादमा उनको अस्तित्व माथि खेलबाड त गरिरहेका छैनौँ मायामा धोका पो दिईरहेका छौँ कि ?
हाम्रो स्वार्थ पूरा गर्न निम्ति र उनको स्वरुप त बिगारिरहेका त छैनौ यदि छौँ भने हामीलाई कुनै संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन् ? त्यसैले आउनुहोस् आज को दिन बाटनै यो प्रण गराँै कि म मेरो / मेरी प्रेमी वा प्रेमीका, जत्तिकै माया प्रकृतिलाई पनि माया गर्छु अनि भन्नुहोस् “लभ यु सो मच डियर प्रकृति” ।
प्रकृति आफैमा प्रेमको अनुपम उदाहरण हो । हामी आमाको गर्भमा छँदा देखिनै उपभोग गर्यौ तर चिन्न सकेनौँ, जानेनौ तर बल्ल महसुस गर्दै छौँ । त्यसैले आजको यस प्रणय दिवस र भोलिका दिनदेखिनै प्रकृतिलाई विभिन्न स्वरुप र व्यवहारमा माया गरौँ । वातावरण संरक्षण, प्रकृति र पर्यावरण जोगाउन केहि प्रण र प्रतिवद्धता व्यक्त गरौँ । प्रकृतिविना मानव संसारनै रहने नसक्ने अवस्थामा उनको अस्तित्व रक्षा गर्न एक भएर लागौँ । मनले भनौँ लभ यु प्रकृति अनि भोलिबाट व्यवहारमा पनि त्यस्तै गरौँ ।
(लेखिका वातावरण विज्ञानमा स्तानकोत्तर अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।)
स्थानीय सरकारका कानुनी धरातलपनि बन्नुपर्छ ।
मुलुक संद्धियतामा प्रवेश गरेसगैँ गाँउ गाँउमा स्थानीय सरकार पुग्ने प्रचार प्रस...
रहरले मात्र बन्दैन वातावरणमैत्री शहरः ई अमात्य
स्थानीय सरकारले वातावरणमैत्री विकासका बारेमा चर्चा मात्र गरेर नपुग्ने जानकारह...